XAYAWAANKA REER BARI EE REER GALBEEDKA, MAXAA XIISO LEH AYAAD KA BARAN KARTAA? - XOOLAHA
Brown oo ah lafdhabarta lafaha
In nolosha tuulada ee dadka tuulada, xayawaanka ugu caansan waa sac. Waxaad qiyaasi kartaa xayawaan ay ku jiraan xayawaan duug ah, lo'da, riyaha, doofaarka, iyo xayawaanka kale. Dunida, weli wali waa sida wanaagsan.
Waxay ku taallaa Jamhuuriyadda Federaalka ee Jarmalka, Carruurta sidan oo kale ah waxay u egtahay mid aad u wanaagsan, sababtoo ah qaar ka mid ah, sida wacan waxay bixisaa fursad ay ku arkaan xayawaanka beeraha markii ugu horeysay.
Magaalada Boston ee Boston, ayaa lagu sameeyay baaritaan dadweyne, qaar badan oo ka mid ah carruurta la daraaseeyay ma oga fikradda ah in lo'da ay ka ciyaaraan wax soo saarka caanaha. Waxay u maleynayaan in caanaha la soo saaro si la mid ah cabitaano la kariyo. Laakiin dhammaan waxyaabaha caanaha laga sameeyo, waxaan ku leeyahay lo'da.
Oo maanta ka socda maqaalkan waxaad ka baran doontaa sifooyinka muuqaalka lafdhabarta Latvian.
Maxaad xiiso u leedahay inaad wax ka barato noocaan oo ah lo'da?
Xayawaanka reer Bari ee Latvia waxaa abuuray adoo goynaya lo'da aboriginal of Latvia leh bulush ah ee deenish ah iyo geedka malaa'igta, xaaladaha ah dayactir wanaagsan iyo nafaqada.
Sanadkii 1947, caanahan waxa ay magaceeda ku bixisay "Bannaan Bannaan oo ah Latvian".
Xayawaanka reer Bari ee reer galbeedka waa mid caanaha laga sameeyey, laakiin sannadkii la soo dhaafay nooca isku dhafan ayaa si tartiib ah u bilaabaya inuu dhaco.
Waqtiga Midowga Soofiyeetiga ee Latvia, taranka Latvian ee caleen ayaa ka dhigay 99 boqolkiiba dhammaan lo'daha lagu hayo waddankan. Tani waxay ahayd mid ka mid ah calaamadaha dalkan. Xitaa mid ka mid ah lacagtii Latviyada waxay leedahay muuqaalkeeda.
Dabcan, caanahan ma aha midka ugu horreeya ee qiimeynta, laakiin haddii aad bixiso dhamaan shuruudaha lagama maarmaanka u ah koritaanka this caan, aad jeclaan doonaa.
By waxa sifooyinka muuqaalka Waxaad ka heli kartaa muuqaalkan, waxaan hoos ku taxanahay:
Dastuurka ah ee noocaan ah waa mid isdhaafsan. Jirku waa yar yahay, dhererkiisuna waa 155 sentimitir ilaa 165 sentimitir, lafaha khafiifka ah. Caanaha ayaa leh laab laab ballaaran. Sacuudiga dheer iyo ballaaran.
Madaxa aadka u yar yar.
Dhererka xayawaanka ku jira qiyaastu waa qiyaastii 130 sentimitir, xaddiga feedhka waa 193 sentimitir, qoto dheer ee xabadka waa qiyaastii 71 sentimitir.
Xayawaanku waxay leeyihiin midab casaan ah oo leh midabo kala duwan. Tusaale ahaan, qoorta iyo lugaha marwalba way ka madow yihiin inta ka dhiman jirka.
Cabbirka hal qaali ah waa qiyaastii nus tan, miisaankuna wuxuu gaarayaa hal tan. Horeba da'da hal sano iyo badh hal diga ayaa miisaankiisu ka socdaa saddex boqol illaa afar boqol iyo kiilo. Miisaanka qallalan waa qiyaastii boqolkiiba 50.
Udder ee koobka finan ee burenok. Waa mid caan ah, saamigal ah oo aad u wanaagsan. Meelaha ibta naaska waa sax.
Waa noocee sifooyinka wanaagsan wuxuu leeyahay jinsiyad Latvian brown oo hoos ku qoran:
Isku celcelinta celceliska hal lo'da sanadkiiba wuxuu ka socdaa 3,000 ilaa 4,100 kiiloogaraam oo caano ah. Taasi waxay suurtogal u tahay in ay markhaati ka noqoto in ay ka dhalato wax soo saar badan
Tani waxay si fiican u habboon xaaladaha cimilada kala duwan, waxaa si fiican u dulqaadanaysa cimilada kulul.
Caanaha ayaa sidoo kale leh astaamaha hilibka wanaagsan.
Tayada wanaagsan ee taranka Latvian brown waa dhaxalka dufanka caanaha.
Horudhaca taranka waa sidoo kale sifo wanaagsan.
Waxa kale oo xiiso leh in laga akhriyo leetemia ee lo'da.
Ku qasaaro Tani waxay ku jiri kartaa tilmaamahan soo socda:
Tirada laga jaray buuggan waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay laab laaban.
Meelaha aan habooneyn ee addimada xayawaanka ayaa sidoo kale ah mid aan la helin.
Qaybtaas oo kale oo dheeraad ah ayaa loo saari karaa dib u qaabeynta saqafka.
Dhibaato weyn oo ka dhalatay noocan oo kale ah waa qaabka uu u yahay cudurka sida leetemia.
Waa maxay astaamaha noocyada lafdhabarta Latvian?
Sidii hore loo soo sheegey, noocaan ayaa iska leh nooca caanaha, taas oo muujinaysa dhalidda sare.
Xayawaanka lafa-beedka ah ee reer galbeedka waxaa lagu daboolayaa xaaladaha cimilada ee gobolka Baltic, laakiin sidoo kale waxay u dulqaadaneysaa cimilada kulul.
Waxyaabaha kale ee kala gedisan ee curyaaminta dadka kale waa nidaam tarin oo wanaagsan.
Muuqaal ah ee lo'da ee caan this waa wareejinta caano dufan sare by dhaxalka.
Waxyaabaha kala soocaya waa noloshii dheer ee lafdhabarta lafiyiinta.
Waa maxay wax soo saarka beeraha Latvian brown?
Sidaas oo kale Caanahan waxaa loo tixgeliyaa caanahamarkaa dabiici ahaan waxay lahaan doontaa wax soo saarka caanaha oo aad u sareeya.
Inta lagu jiro xilliga nuujinta, oo ah 305 maalmood, soosaarka caanaha ee hal lo'da wuxuu noqon karaa 3500 ilaa 4,500 oo kiiloogaraam oo caano ah, heerka dufanku wuxuu u dhexeeyaa 4.45 ilaa 4.5 boqolkiiba. Caanaha waxaa lagu kala soocaa tayada iyo dhadhanka, taas oo aad u kala saara caanaha dadka kale.
Waxaa jira, dabcan, buugyarahan iyo diiwaannada Burenka, kaas oo bixiya qiyaastii 10,000 kiilo oo caano ah. Lo'da caanka ah waa xayawaanka Tulpe, taas oo 330 maalmood ay bixisay 10,649 kiiloogaraam oo caano ah, oo ah dufankaasi oo ahaa 4.1 boqolkiiba.
Qodob muhim ah oo ku jira noocaani waa isu-gudbinta dufanka caanaha dhaxalka.
Sida sifooyinka hilibka, waxay ku qanacsan yihiin. Maqsinnada culus ee dibi waa qiyaastii boqolkiiba 50.
Xayawaankani waxa uu leeyahay nidaam tarmo oo si fiican u horumarsan. Sidaas miisaankii kubax dhalidda cusub wuxuu ku saabsan yahay afartan kiilo garaam.
Hilibka iyo waxsoosaarka caanaha ayaa saameeya shuruudaha taranka.
Waqtigeena, shaqadu wali waa socotaa si loo hagaajiyo tayada caleemaha Latvian brown.
Wax soo saarka caanaha, iyo sidoo kale waxyaallaha dufanka caanaha, ayaa saameyn ku leh dabeecadda si ay lo'da uga timaado da 'aad u yar, tani waa muhiim in la quudiyo oo si taxadar leh u daryeelo. Haddii aad rabto inaad hesho dhalid xogta caanaha, markaa waxaad u baahan tahay inaad sameyso cunto kala duwan oo ah lo'da.
Gaar ahaan, waxaad u baahan tahay inaad fiiro gaar ah u yeelato qaybta carbohydrate ee ku quudinta. Cuntadooda waa in ay ku badan yihiin xididdo, baradho, dabacasaha, iyo sidoo kale boorashka iyo silage-geedka.
Xilliga xagaaga, naasku waa in la siiyaa cagaar cagaaran. Waxa kale oo lagama maarmaan ah in la dareeno in aan la abuurin xaalado walaac leh oo ah lo'da, maqalka xad-dhaafka ah ama daaweynta xun ee xayawaanka, waxaas oo dhan waxay saameeyeen waxsoosaarkooda.
Tani waxay leedahay qiyaastii labaatan labo xariiq oo hiddesid ah. Kuwa ugu fiican ayaa ah: Margonis Odins, Danos, Gunnar Rex iyo kuwo kale. Qiyaastii toddobaatan qoys ayaa ka soo jeeda dhammaan lo'du ka soo jeeda maadooyinka dufanka caanaha iyo mugga.